Hoggaamiyayaasha Safro Sidee Bay Kiniisadaha Markhaatiyaasha Yehowah u Caawiyaan?
Hoggaamiyayaasha Safro Sidee Bay Inoo Caawiyaan?
Kitaabka Quduuska ah in badan buu ka hadlaa Barnabas iyo rasuulkii Bawlos. Nimankan waxay ahaayeen hoggaamiyayaal safro oo booqan jiray kiniisadihii hore. Bal maxay sidan u yeeleen? Sababtu waxay ahayd walaalahood aad bay u daneyn jireen. Bawlos wuxuu Barnabas ku yiri: “Aynu ku noqonno oo booqanno walaalaha . . . inaan soo aragno siday yihiin.” Wuxuu diyaar u ahaa inuu boqolaal maylal (kiilomitirro) safro siduu walaalihiisa u xoojiyo. (Falimaha Rasuullada 15:36) Maanta hoggaamiyayaasheenna safro isla doonistaas bay haystaan.
Waxay u yimaadaan inay ina guubaabiyaan. Hoggaamiye walba wuxuu booqdaa in la mid ah 20 kiniisadood oo mid walba sanadkii laba asbuuc oo kala duwan buu la soo joogaa. Aad baan uga faaʼiidaysan karnaa waaya aragga walaalahan iyo naagahooda haddii ay xaas leeyihiin. Waxay ku dadaalaan inay bartaan dadkoo dhan, kuwa yar iyo kuwa weynba. Wayna jecel yihiin inay inoo raacaan wacdiga iyo casharrada aan la helno ardaydeenna Kitaabka. Hoggaamiyayaashan odayaashay la booqdaan walaalaha kiniisadda oo waxay kulanka iyo shirarka ka bixiyaan khudbado aad inoo dhiirrigeliya.—Falimaha Rasuullada 15:35.
Way ina daneeyaan. Hoggaamiyayaasha aad bay u daneeyaan iimaanka kuwa kiniisadda ku jira. Waxay la kulmaan odayaasha iyo caawiyayaasha kiniisadda siday u eegaan hormarka kiniisadda. Waxayna siiyaan talo ku caawin karta masʼuuliyaddooda. Horseedyadana waxay ku caawiyaan inay ku fiicnaadaan wacdigooda. Way ku farxaan inay bartaan dadka kiniisadda ku cusub iyo inay arkaan siduu iimaankooda u kordhay. Nimankan walaalaheenna ah iyagoo waxba inaga ceshan bay darteenna u shaqeeyaan. (2 Korintos 8:23) Waa inaan iimaankooda iyo jacaylkay Ilaahay u qabaan ku dayanno.—Cibraaniyada 13:7.
Hoggaamiyayaasha safro maxay u booqdaan kiniisadaha?
Booqashadooda sidee uga faaʼiidaysan kartaa?
Calaamadso taariikhda uu hoggaamiyaha safro soo booqon doono kiniisaddaada sidaad u maqashid khudbadihiisa. Macallinkaaga u sheeg haddii ad rabi lahayd inuu isaga ama naagtiisa ay yimaadaan casharkaaga Kitaabka sidaad isku baratiin.
Wadaag Wadaag Hoggaamiyayaasha Safro Sidee Bay Inoo Caawiyaan?